Obama wuxuu Fitbit ka doorbidaa Apple Watch | Wararka IPhone
Obama wuxuu Fitbit ka doorbidaa Apple Watch
Cristina Torres sawir-haye | | Tartanka
Runtu waxay tahay in ka badan hal munaasabadood, dadka caanka ah waxay Apple u sameeyeen wanaag weyn iyagoo la soo muuqday qalabkooda iyo waxyaabaha ugu waaweyn. Marar badan, dhab ahaan waa la siiyaa xayeysiin. Xaaladaha kale, iyagu waa xulashooyin shaqsiyeed oo doorbidaaya xayaysiinta shirkadda. Laakiin xaalado yar saamaynta ka soo horjeedka ayaa la muujiyaa maxaa yeelay tufaaxu wuxuu umuuqdaa inuu garanayo tabaha xitaa si looga dhaadhiciyo kuwa heshiisyada la saxiixday tartanka. Waa ku filan tahay oo kaliya in la xasuusto kiisaska tartamada caalamiga ah ee dacwadaha ay ka dhigayaan alaabada Apple inay meesha ka baxaan maxaa yeelay waxay ku soo dhuunteen doorashada shaqsiyaadka caanka ah.
Xaaladdan oo kale, sheekadu waa uun dhinac kale, oo maxaa yeelay waa wax aan caadi ahayn, waxaan doonayay inaan ku keeno balooggeena maanta. Sawirka ugu sareeya ee Obama lagu arko isagoo xiran Fitbit halkii uu ka noqon lahaa Apple Watch ayaa siinaya waxyaabo badan oo looga hadlo baraha bulshada. In kasta oo qof waliba aad u xor u yahay inuu doorto badeecada uu doonayo, haddana waxaa iska cad Obama wuxuu wataa culeys caalami ah oo aad u badan sida haddii xaqiiqda ah inuu ka tanaasulay qalabkeeda tufaaxa aan la dareemin. Tanna, su'aasha ayaa mar kale soo ifbaxaysa, Apple Watch runti ma muhiimbaa sida iPhone?
Yo Waxaan si gaar ah u maleynayaa in haysashada Apple Watch ay leedahay faa'iidooyin badan. Laakiin wuxuu u haystaa kaliya koox gaar ah oo jilicsan oo doonaya inay sida ugu badan uga faa'iidaystaan ​​curcurka. Kuwa doonaya wax fudud, oo aan lahayn shaqooyin badan, iyo wixii ka sarreeya oo aan ka qaadaynin dhammaan sumcadda moobiilkooda, way cadahay inaysan u baahnayn saacad Apple ah. Ma la joogaa waqtigii laga fikiri lahaa qalab cusub oo kalabar u dhexeeya smartwatch-ka hadda jira iyo jijimooyinka ugu caansan uguna macquulsan? Shirkaddu waxay u badan tahay inaysan sameyn doonin boodboodka sanadkan, maxaa yeelay waxay horeyba u sameysay isbeddello badan oo fikradaha ah. Laakiin si daacad ah, waxaan u maleynayaa goor dhow ama goor dambe inay ku dambayn doonto maraakiibta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Obama wuxuu Fitbit ka doorbidaa Apple Watch
Kajawaabida su'aashaada ... miyuu Apple Watch runtii muhiim u yahay sida iPhone-ka?
Uma maleynayo in labada midkoodna ay muhiim yihiin, laakiin dabcan da'da isgaarsiinta waxa wadar ahaan la bixin karo waa Apple Watch.
Maaddaama aan horey uga faallooday in ka badan hal munaasabadood waxaan aaminsanahay in dhammaan shirkadaha ay ka hormareen waqtigooda iyagoo bilaabay SmartWatches feker ahaanteyda iyaga oo aan dhammaysan, runti baytariga qosolka badan (kani waa kan ugu xun), iyagu ma ahan kuwo biyuhu xiraan (oo waxaan ula jeedaa) Qubeyska barkadda ama badda) sidoo kale waa marka laga reebo ogeysiisyada, in tan lagu sameeyo saacad kasta oo ah 30 Shiineys oo Shiinaha ah, ma arko adeegsi kale. Si kale haddii loo dhigo, waxay u muuqdaan kuwo aad qaali ugu ah "casiirka" oo runtii la soo saari karo. Kuwaas haa, xaaladaha qaarkood sida midka gacanta lagu hayo ama LG Watch Urban waa in la sheegaa, gaar ahaan tan dambe oo aad u qurux badan.
Jawaab Alfonso R.
Dabcan, maxaa yeelay Obama ayaa loo oggol yahay inuu xirto wuxuu doono ... sida markii lagu qasbay inay isticmaalaan blackberry iyo sababo kale sida amniga, iwm, wax shaqo ah kuma laha. Waad arki kartaa in hadda ay mooddo in lagu jahwareeriyo saacadda tufaaxa tanna waxaad u leedahay wax cudurdaar ah.
Jawaab Dan Fernandez Fernandez
Way cadahay in madaxweyne Obama uusan yeelan doonin Apple Watch marka uusan qaadan karin iphone. Xusuusnow inaad isticmaasho BlackBerry. In kasta oo uu soo daabacay qoraal uu soo dhigay iphone, haddana malaha isaga ma ahayn ee waa qof ka tirsan shaqaalihiisa. In kabadan hal jeer wuxuu cadeeyay in sababo amaan awgood uu isticmaalo BB.
Waxaad siineysaa xanuunka Cristina iyo maalin kasta si aad iyo aad u badan
Ku jawaab Antonioo
Obama nolosha wuxuu wax ku qaadan doonaa iOS ama Android si uu u arko haddii aad ogaan doonto !!
Kacaankii GIF: Hal sabab oo kale oo loogu beddelo Telegram
Apple wuxuu sii daayaa beta labaad ee iOS 9.2.1. Waxa kale oo jira nooc dadweynaha ah